Ingrid Betancourt | Save Burma
အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပိုစတာ ဂုဏ်ပြုချိတ်ဆွဲထား
Rome’s mayor Walter Veltroni unrollsaposter of Burma’s Aung San Suu Kyi to mark her 61st birthday. The pro-democracy leader has spent 10 of the last 16 years under house arrest.
VOA (Burmese) ၂၀၀၈ ဇန်န၀ါ၇ီ (၁)ရက်နေ့ သတင်း
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေနဲ့ အမြဲစည်ကားနေတဲ့ အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့တော် ခန်းမကြီးရဲ့ ရှေ့မှာ အဖမ်းခံထားရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတလောင်းဝင်ပြိုင်ဖို့ စည်းရုံးရေးဆင်းနေတုန်း ကွန်မြူနစ်သူပုန်တွေ ပြန်ပေးဆွဲသွားတာကို ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံက အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် Ingrid Betancourt တို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံကြီးကို ပူးတွဲ ချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဥရောပ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် မသင်းသီရိကို ကိုကျော်အောင်လွင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ပြထားပါတယ်။
RFA (Burmese) ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ (၃၁)ရက်နေ့ သတင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု ရောမမြို့မှာ ကျင်းပ
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာ ပြန်ပေးဆွဲ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ သမ္မတလောင်း အမျိုးသမီး မစ္စက် ဘက်တန်ကုတ်တို့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့မှာ တနင်္ဂနွေနေ့က လှုပ်ရှားမှုတခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်၊၊
ဗွီဒီယိုကြည်ရန် (WMV) – Download 1.52M
Aung San Suu Kyi awarded “Rome for Peace and Humanitarian Action …
Mizzima.com, India – Dec 20, 2007
The City of Rome, in recognition to her commitment, has announced Daw Aung San Suu Kyi as the recipient of the 2007 Peace and Humanitarian award. …
Baggio to receive prize on behalf of Aung San Suu Kyi
Earthtimes, UK – Dec 19, 2007
Milan – Myanmar pro-democracy leader Aung San Suu Kyi has asked former football star Roberto Baggio to receiveaprize the city of Rome awarded her, …
Posted in ဗီအိုအေ, အာရ်အက်ဖ်အေ
Tagged with Aung San Suu Kyi, Ingrid Betancourt, Italy, Rome